Rakkoo tokkummaa nu dhokete ifa bahee dubbiisaa.
Rakkoon tokkummaa nu dhorke Abaarsa qabnaa hajedhamu hicittin isaa beekame. Waggaa 26 gutuu dhaaboliin siyasaa Oromoo waligalanii tokkummaa jabeessaanii qabsaahuu han dadhabani hicitiin isaa maali ? Wantti tokkummaa diigu siyasaa,dantaa, angoo,, dubatti hafumaa, hojjaa diinaa, Amanttiidha. Waan 6kana keessaa hundeen rakkoo tokkummaa wagga 26 isa kami?
1) Rakkoo siyasaa otoo taee maridhan hikama.
2) Dantaadha akka hijjenee daantaan irraati wal lolanii tokkummaa diigan tokko isaan giddu hijiru.
3 )Angoo gubbaati walnyatu akka hijenee angoo tokko Oromoo harka hijiru ykn isaan harka hijiru.
4 )Dubaatii hafumaatu akkan isaan godha akka hijenne uummaanni dubattihafaa isaanii gadi jiru rakko yoqabaate mariatee waligaleet tokkummaa isaa jabeeseeti jiraata.
5 )Hojjaa diinaatu issaan diigaa akka hijjenee dhabbolin hundumtuu diinaan hinoggonamani. Hundumtuu doofaa siyaasaa himbeene miti. Kanaafi hundeen rakkoo tokkummaa goleesitoota amanttii duganii machanii waligaltee balleessan tauu isaa ragaa qabatamaa tarttibaan ilaalaa.
6) Jarraa 11 dura wagga 1000 ol rakoon tokkummaa maaqaa amanttii calqabe.
Walloo keessaatti bara dheeraa Oromoo Kiristaanaafii Islaamaatu walwaranee. Bara dheeraa warra abbaa muudaa waaqeffataafii Isilaamaatu walwaranee. Seenaa Habashaa keessaatti waaraana "Zemene mesafit" han jedhamu bara Oromoon walwaranedha. Bara Wayyaaneefi Shabiyaan Dargii waraanan malee seenaa keessaati Habshoonni walwarananii himbekani. Oromoon maaqaa amanttii Isalaama diina waalittii taee walwaranee walbutuchee tokkummaa Gadaa diigee humna dhabee Abasiiniyaa harkkatti kufee rukutamee barbadaheet biyyi isaa qabame. Maaqaa amanttii bara dheera Akka diinaatti harka walqabachuu wajjin nyaachu yodue walawaalu lagate. Amanttiin uumaa waaqayoo diigeet dhiiraafii dubarttin waljaalachuu waldhugachuu walhammachuu walfuudhanii ijolle horachu dadhabani. Kun bu'ura rakkoo tokkimaati. Uummanni lafee tokko irraa umamee akkanatti bakka lamaatti gargari bahee uummaata biyya lama kessaa jiraatu fakkateet jiraata. Akka ragaa kanaatti hundeen rakkoo tokkummaa amanttii dha. Oromoon gabrummaa amanttii keessaa otoo himbahin tokko ta'uu hindandau. Maaqaan isaa wallaalamee abaarsa qabnaa hajedhamu hicittin isaa gooleesitootaa amanttii gosummaa andummaa kutaa tauun beekame.
Oromoon sammuu jijiiratee gabrummaa amanttii keessaa bahee akka uummaata qaroomeet jiraachu isa barbaachiisa. Amanttii irraa bu'aa ulfinaa guddinaa tokko hinargamne. 1973 bara ABO ijaarraamee calqabee hamma yonaatti waggaa 44 gutuu tokkummaa qabsaahota hanndigu gooleesitoota qubaan lakkwamani amanttii dhugannii machaanidha. Jaarraa Abbaa Gadaa ABO irraa fotoqee IFLO ijaaratee bahee walwarananii namoonnii 10,000 ol taan han dhumani maaqaa amanttiiti. ABOn eega biyyatti galee booda Oromoon tokkummaa jabessee akka dhaabatu siaa baayee koraa waameeti waligalteen dhabame. Sababnii isaa gooleesitootaatu "Wallaga jalatti hibulu" jechuu calqabe. Eegaa ABOn biyyaa bahee booda tokkummaa jabessuufii korri siaa baayee godhameet waligaluun dhibe.
Dhaaba tokkumaa jabesuu ULFOn ijaarameeti sabaaba gooleesitootaa diigamee. "ABOn maqaa isaa jijjiiratee waran isaa qabatee ULFOti makamuu qaba "jedhanii jequmsaa kaafnaan waarri ABO maqaa hinjjiiru jedhaniit didaani. Kaamaal Galchuu wayyaanee wajjiin mari'atee Oromoota waraana wayyaanee keessaa jiran 170 kophaatii baasee fudhateet Eertiraa seenee. Waarri ABO dhugaa seeaniiti simatan. Jiaa jahaa otoo higutiin eenyummaan isaa sirriiti otoo himbekamiin qabsoo keessaati otoo hiqoratamiin gareen isaa seera malee Dawiid Ibsaa angoo irraa buusaanii kamaal dura ta'a ABO godhanii filatani. Kaayooin isaanii baramee eega fashalaahe booda akkuma jiranitti ABO keessaa bahaniiti dhaaba Jijjiiramaa ijaaratanii jiaa jaha keessaati waligaluu dadhabaniiti bakka 3 addan bahanii akka galabaa bittimanii badani. Murnii kaamaal Ginboot 7iti kooluu gale. Murni lamataa maaqaa ODG baafatee. Inni sadaffan Nuroo daddafo harka jiru ABO tokkoomee jedheeti ofwaama. Akkanatti ABO bakka 4 addan baasaanii humnaa saba guddaa bittimsaanii dadhabbisiisaniit qabsoo ashaleessani. Ofumaa isaaniitit ABO keessaa yaaaniiti "ABO warra wallagaatin qabamee" jedhanii uummaata afaan fajjesanii tokkummaa waraanaa jiru.
Gooleesitoonni eergmatoota wayyanee killeen OPDO diaysporaa keessa dhokatanii dhaaba biraa ijaaranii tokkummaa diiganii ABO dadhabsisanii qabsoo ajjeesuufi sochoaa jiru Oromoo kana beekii diina dhiiga keesaa ofeeggadhu. Uummaanni tokkummaa isaatii du'uu qaba ykn amanttiifi jedhee barbadaahuu qaba.
Killee dhaabaa falaffalanit tokkummaa ajjeesuu. Dhabini Jawaari ijaarachuufi adeemuu Oromoo leadership conversation seenaa keessaatti dhaaba 18 tafaa ta'a. Dhaabnii amanttii gosa ganda kutaa hundahee godhatee of ijaaruu wayyanee caala Oromoo diigee tokkummaa goleesitoonni waggaa 26 gutuu caccabsaanii humna dhowaan barbadeeset balleesaa jabeessaa ofeeggadhaa. Oromoo hundumaa han hammaatee dhaaba jaalatamaa ABO caalu seennaa keessaati hindhalatu. Diigdoonni barabaraan killee dhaabaa falafalanii tokkummaa Oromoo diigan kaayoo isaanii bakkaan gahuufi shira wayyanee caalu hojetuu hubadhaa. Dhaaboollii 17 kanaan dura ofijaaraan keessaa ABO fii OFK malee tokko qabsoo keessa hijirani. Hundumtuu tokko taanii ABO hundee bilisummaa otoo jabeesaanii jiraatanii bilisummaan qaata argame. Dhaabnii jawaar Junadin saaddootin gorfamee ijaarramufi adeemuu OPDO caala tokkummaa Oromoo biyee nyachiisaa beekaa ofeegadhaa.
Diigdoonni bara baraan killee dhaabaa falaffaln kayoo dhoksaa qabuu beeka. Gooleesitoonni maal jedhanniti odeesuu? "Musilimooni baayina haajaa qabnuufi unutu Oromoo ogganuu qaba" jedhu. Oromoo ogganufi sabboonummaa Oromummaa malee bayina namoota amanttii himbarbaachisu. Dhaabni Jawari ijaarufi adeemuu kun kaayoo kana qaba. Kaayoo isaanii bakkan gahuufi waggaa 26 gutuu akka rirrimaa ABO nyaatanii lafee qorqanii dhiigaa xuuxanii dadhabisisaani dhadhaba dadhabaa jedhanii maqaa xureessaanii balleesufi rraatti qabsahaa jiru beekaa. Hardhaa gabrummaa baataanii tokkummaa handiigaan gaafaa bilisummaan argamee Bokoharaam ijaaraniiti Oromoo arbadeesuu hubadhaa. Kanaafi Wayyaanee dhiisaaniiti ABO nyaatu diinaa dhiisaanii Shanee Shanee Shanee jedhanni obbolaan isaanii waraanaa olu. Kaamaal galchuu aabbaa waraanaa taee Junadiin dura ta'a ABO otoo taee"gootaa teena hayuu teena" jedhanii diibee rukatanii lafa dhitu. Akka ragaa baayeen agarsiisuti uummaanni dammaaqee hubatutti Seenaan mirikaneesutti gooleesitoonni qabsoo amanttii gaggeessaa jiru hubadhaa. Kiristaana Islaama waqeeffataa otoo hijedhiin fundura dhabadhaa tokkummaa Oromoo eegaa. Diigdotaa bara baraan kiillee dhabaa falafalaanii tokkummaa ajjeessan wayyaanee chaala waraanaa.Tokkummaan faayyaa Oromoo gaachanaa qabsoo bilisummaa tauu beekaa. Kanaafi hundumti keessaan tokkummaa akka lubbuu jaaladha goleesitoota irraa eegaa dhaloota fii dabarsaa saba kufee laafaa kaasuufi kutadhaa qabsahaa. Xumurama. Dhaabooliin ABO wajjin waliigaluu dadhaban hicitiin isaa gooleesitoota qubaan lakkawaman bilisummaa amanttiifi qabsahani dha. Bilisummaa Oromoo ttii otoo qabsaahanii waggaa 26 ABOtti hindulanii lammii isaanii diina godhatanii waraananii tokkummaa hindiigani. Namoonnii daboo bahaanii mana ijaaran hidda dagalee saagaa walhisaamani. Akka makmaaksaa kanaatii namoonni kaayoo tokko qabani tokkummaafii qabsoo gubbaatii wal hin waraanani.
Seenaa kan uummaatafi dabarsaa.
N.B. Oromoon waan beekuu qabu Amantan kammi iyuu seenan isaa yoo qooratame Meesha garboonfata, madda jeequmsa fi waldhabinsa uummata, faca'iinsa biyya fi warreegama lubuu fi madda duguuga sanyii baleesi Amanta dha. European wagaa 100 ol Katoliiki fi Protestantin wal fiixaa turan, lubuu heddu balleessan qabeenya gudatu manca'ee, warreegama gudatu kafalamee hara'a Waldaallee Amanta lachuu namni seene waaqeefatuu hin jiru, Churchii gurgguudan argitan sun guyyaa sanbata ilee cuufa ola. Biyya Araba kan balleessa jiru Amanta Musilimatti Suni fi Shia jeedhan wal balleessa jiru, Iraqi, Syria; Lbiya, Yemen gutuuman gutuutti badani jiru. Egypt , Turky fi Saudi Arabiyan ilee badii irra waan hafaan hin fakatuu yoo dafan gara demokrastti of jijjiru yoo batan.